Rasmi: Filimka 2.0 iyo mudo lix maalmood ah ganacsigiida gudaha Hindiya dhamaan luqadaha lagu daawanayo – Filimside.net
Rasmi: Filimka 2.0 iyo mudo lix maalmood ah ganacsigiida gudaha Hindiya dhamaan luqadaha lagu daawanayo
Shabakada Boxoffice India ayaa si rasmi ah usoo daabacday in filimka 2.0 uu keenay 24 Crore shalay oo Talaado ahayd isku darka dhamaan luqadaha lagu daawanayo gudaha Hindiya lacagta nadiifka ah canshuurta ka hor waana ganacsi wacan.
Tani waxay ka dhigan tahay in 2.0 uu 280 Crore nadiif ah soo xareeyay dhamaan luqadaha lagu daawanayo waana ganacsi heer sare ah wuxuuna inta badan ku wanaagsan yahay qaybtiisa Af Hindiga lagu daawanayo sidoo kalena gobolada Tamil Nadu iyo Kerala si wacan ayuu kaga gadmayaa.
Bahubali – The Conclusion ayaa ah filimka Hindiga ah midkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyay wuxuuna keenay 1115 Crore oo nadiif ah dhamaan luqadaha lagu daawaday marka la isku daro.
Suurta gal uma ahan 2.0 ganacsigiisa guud inuu Bahubali 2 gaaro balse wuxuu dhaafi karaa ganacsiga Bahubali – The Beginning oo 418 Crore oo nadiif ah dhamaan luqadaha lagu daawaday oo la isku daray.
2.0 ganacsigiisa gudaha Hindiya lacagta nadiifka ah ama canshuurta ka hor inuu 500 Crore soo xareeyo dhamaan luqadaha kala duwan marka la isugu daro wey ku adkaan doontaa madaama bishan December filim saameyn leh tiyaatarada la saari doono sida Kadernath, Zero iyo Simmba.
Fadlan hoos kaga bogo mudo lix maalmood ah ganacsiga uu sameeyay 2.0 isku dhamaan luqadaha lagu daawanayo gudaha Hindiya:
Khamiis – 62.31 Crore
Jimco – 44 Crore
Sabti – 55 Crore
Axad – 68 Crore
Isniin – 29 Crore
Talaado – 24 Crore
Wadarta Guud – 282.31 Crore (All India Language Net Gross)
Waxaa Aqrisay 757